Ngubani owasungula iSailboard
I-windsurfing isebenzisa isenzi lomntu omnye obizwa ngokuba yi-sailboard.
I-Windsurfing okanye ibhodi yokudlala ibhola elidibanisa ukuhamba nokuhamba. Isebenzisa isenzi lomntu omnye obizwa ngokuba yi-sailbhodi equkwe ibhodi kunye nesigxina.
I-sailboard yaqala ukuthobeka ngo-1948 xa uNewman Darby eqala ukukhulelwa ngokusebenzisa umkhombe ophethe ngesandla kunye nesigxina esikhankanywe kuyo yonke indawo ukulawula i-catamaran encinci. Nangona iDarby engayifaki i-patent yakhe yokwakha, ngokuqhelekileyo uyabonwa njengomqambi we-sailboard yokuqala.
UDarby wagqiba ukufayiliza kwaye wanikwa i-patent design yomntu oyedwa ngomkhumbi ngomkhuhlane wee-1980. Uyilo lwakhe lwalubizwa ngokuba yi-Darby 8 SS.
Kodwa ngelo xesha abanye abaqambi babenemveliso yelungelo lobunikazi lomkhumbi. I-patent yokuqala ye-sailboard yanikezelwa kumkholosisi kunye noonjiniyela uJim Drake kunye ne-surfer kunye ne-skier uHoyle Schweitzer ngo-1970 (yafakwa ngo-1968 - yabuyiselwa ngo-1983). Bambiza ukuyila i-Windsurfer, eyayingamamitha ayi-3.5 ubude kwaye ibingamakhilogremu ama-27. UDrake noSchweitzer basusela kwi-Windsurfer kwiingcamango zasekuqaleni zikaDarby baze bamkele ngokupheleleyo ngokuveliswa kwayo. Ngokuya kwiziko lewebhu le-Windsurfing:
"Intliziyo yokuveliswa (kunye ne-patent) yayikukhupha umkhumbi kwi-joint joint, ifuna umnqwelisi ukuba axhase i-rig, kwaye avumele ukuba i-rig ikhonjiswe naluphi na ululathiso. kuqhutywe ngaphandle kokusetyenziswa kwesigxina - umkhumbi kuphela wendlela yokukwazi ukwenza oko. "
Kwi-patent abstract, iDrakake neSweitzeris bachaza into yabo njengesixhobo ... "iipropati ezixhasayo ngomoya apho i-mast iphakanyiswe kwi-craft kwaye isekela i-boom ne-seil. kwaye ukhusele umkhombe apho phakathi kwesimo se-mast kunye nomkhumbi onokulawulwa ngumsebenzisi kodwa ngokukhululeka ekunqandeni okubalulekileyo ngokungabikho kolawulo olunjalo. "
I-Schweitzer yaqalisa i-polyethylene sailboards (i-Windsurfer design) ekuqaleni kwawo-1970. Le midlalo yaba yintanda kakhulu eYurophu. Inkwenkwezi yokuqala yehlabathi ye-windsurfing yabanjwa ngowe-1973 kwaye, ngasekupheleni kweminyaka engama-70, i-windsurfing fever yayinamandla eYurophu ekubambeni kunye nayo kwimizi emithathu ephethe i-sailboard. I-windsurfing yayiza kuba ngumdlalo we- Olimpiki ngo-1984 kumadoda kunye no-1992 kubafazi.
Umfazi kaNewman uNawomi Darby ngokuqhelekileyo uthathwa njengowomfazi wokuqala womoya kwaye wancedisa indoda yakhe ukwakha nokuyila i-sailboard yokuqala. Bahlangene, uNewman noNahomi Darby bachaza ukuveliswa kwabo kwinqaku yabo Ukuzalwa kwe-Windsurfing :
"UNewman Darby ufumene ukuba unokukwazi ukuhamba ngomkhumbi weemitha eziyi-3 ngokuzibophelela phambili nangemva ngokwaneleyo ukutshintshisa ngaphandle kokukhwela." Ngaloo ndlela (ekupheleni kwee-1940) uNewman unomdla wokuqhuba isikebhe ngaphandle kwesigudlo. / I-2 eminyaka kamva (1964) wenza idibaniselwano yokuqala yokugcina umhlaba kunye ne-flat bottom sailing scow.
Ukubhala Imbali Yomculo - Amapensele kunye neMakethi
I-Wheel Spinning iguqula ii-Fibers kwi-Yarn
Indlela yokuCwangcisela iNtshukumo entsha kwiScuba Diving
U-Elvis Presley Umlinganiselo: 1973
I-American Athletic Conference
Amagama aseNtaliyane Amagama aBantwana
Imbali kaLudwig van Beethoven
Ziziphi iintlobo ezintathu ze-RNA? Ziziphi Imisebenzi Yabo?